OROMOO WALLOO AKKAMITTI GARA JABINAAN AJJEEFAMAN?|OROMSIIS ONLINE
Lola naannoo Amaaraa Godinaalee Shawaa Kaabaa fi Saba Oromoo keessatti torbee lama dura mudate keessaa, taateen namootni ambulaansii keessaa harkifamanii dargaggootaan ajjeefaman mul’isu tibbana miidiyaalee hawaasummaa irratti dubbii ijoo ta’eera.
Viidiyoon daran nama jeequufi miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kun, wayita namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dhagaa fi meeshaalee qara qaban birootiin waraananii yoo ajjeesan mul’isa.
Taateen torban muraasa dura mudate kun miidiyaa hawaasaa gubbaatti akkaan qoodamuun dura, mana maree bakka bu’oota uummataattis ajandaa dubbii ture.
MM Abiy Ahimad paarlaamaatti dhiyaachuun wayita gaaffiiwwan miseensota Paarlaamaaf deebii kennaniitti, miseensoonni mana marichaa lama waa’ee taatee kanaa kaasuun, mootummaan ummata baraaruuf tarkaanfii atattamaa akka fudhatuuf gaafatanii turan.
Taatee kanarratti aanga’aan naannichaa tokko BBCtti akka himanitti, gareen dhimma kana qoratu sadarkaa federaalaa irraa bobba’ee jiraachuu dubbatan.
Taateen kun akkamitti uumame?
Buufata fayyaa Sanbateetti ogeessa fayyaa yaala balaa tasaa kan ta’e Ahimad Aliyyii, namoota taatee kana jalqabarraa hanga dhumaa arganiifi ofiinis hamma xiqqoof du’arraa oolan keessaa isa tokko akka tahe BBCtti hime.
Obbo Ahimad akka jedhutti, ALI Bitootessa 11, bara 2013 lola Axaayyee fi naannawasheetti mudateen, namoonni hedduun buufata fayyaa Sanbateetti yaalaaf dhufaa turan.
Namoota kunneen keessaa ammoo lama miidhaan isaanii yaala cimaa waan barbaachisuuf, gara hospitaalaatti ergamuun dirqama ture.
Kanaafis namootni kunneen gara hospitaala dhuunfaa Yifaat jedhamu kan magaalaa Shawaa Roobititti akka ergamaniif murtaa’e.
Bulchaan Aanaa Jiillee Dhummuugaa Obbo Jamaal Hasan akka jedhanitti ammoo, namoonni miidhaman kunneenii fi maatiin isaanii gara Shawaa Roobititti geeffamuu isaanii irratti sodaa qabu ture jedhan.
“Rifariin erga gara Shawaa Roobititti barreeffameefi uummanni sodaa qaba ture – rakkoon nurra gaha kan jedhu.
Dhiibbaa qaama mootummaa, dhiibbaa keenyaanii akka deeman kan goone. Kanaafis ambulaansii lamaan alatti poolisoota konkolaataa tokko wajjin ergine,” jedhan haala ture wayita ibsan.
Ogeessi fayyaa Ahmad, namoota miidhamtoota waliin ambulaansidhaan deeman keessaayi. Innis taatee erga Hospitaala Yifaat gahaniin booda isaan mudate akkanaan hima.
“Yeroo nuti ambulaansii lamaa fi konkolaataa poolisii tokkoon Hospitaala Yifaat geenyu, narsoota muraasa malee doktoroonni hin jiran.
Hospitaala biraa geessaa nuun jedhan. Yeroo nuti hospitaalichaa bahuuf jirru, karaan nutti cufamee achuma keessatti ugguramne,” jedha.
Konkolaachistoonni fi ogeessi fayyaa kun konkolaataa keessaa bu’anii lafa jiraatanis, namoonni miidhamanii fi kanneen yaalchisuuf dhufan garuu konkolaatichuma keessa akka turanis hima.
“Osuma maal goona jennee dhaabbannee mari’annuu humni addaa naannoo Amaaraa dhufee nu marse. Meeshaa nutti nyaachifatanii jennaan nuti nama nagaa ta’uu itti himne.
Gidduutti ajajaan poolisii magaalichaa dhufee doktoroota sodaachistanii yaala argachaa jirtu nuun jedhe. Sana booda doorsisatu itti fufe,” jedha Ahimad.
Haalli jiru daran hammaachaa deemuun muddamni uumamnaan, namoota yaalchisuuf dhufan keessaa namni tokko ‘bada nu fixaniimii’ jedhee utaalee yoo fiigu, rasaasaan dhahanii ajjeesan jedha.
“Dhukaasni dhagahamnaan hokkora cimaatu uumame. Dargaggoonni marsanii turanis gara ambulaansiitti fiiganii tarkaanfii fudhachuu eegalan.”
Hanga ammaattis poolisiin naannoo Amaaraas ta’e bulchiinsi dhimma kanarratti ragaan gadi fageenyaan hinjiru.
Yeroo ambulaansii irratti xiyyeeffatamu anii fi konkolaachiftoonni mana duubaan fiigne jedha oggeessi fayyaa kun.
Achis mucaan tokko kutaa wayii nu galchee nutti qollofe,” jedha akkaataa lubbuudhaan oolan yeroo himu.
Namni lubbuu isaanii baraare kunis yoo dargaggoonni kunneen nu barbaachaaf karaa nuti darbine dhufan ‘asiin darbaniiru’ jedhee nurraa dabarsaa ture jedha.
Namoonni ambulaansii lama keessa turan kanneen yaalaaf dhufan namni lamaa fi kanneen yaalchisuuf faana dhufan namoonni jaha walumaa galatti, namoonni saddeet mooraa Hospitaala Yifaat keessatti haala sukkanneessaan ajjeefamuu dubbata.
Konkolaachisaan tokko dursee kan miliqe ta’us innii fi konkolaachistoonni lama akkasumas poolisiin sadii, kutaa dhiphaa sana keessatti sababa nama tokkootiin lubbuun baraaramne jedha.
Isaan booda hoo…
“Galgala erga hokkorri suni tasgabbaa’ee naannoo sa’aatii lamaa kutaa sanii baasanii waajjira poolisii nu geessan.
Achiis nu baasanii gara kaampii Poolisii Federaalaa nu geessanii achi bulle. Isaanis gara Sanbateetti nu geessan,” jedha.
Namoota lubbuun isaanii haala sukanneessaan darbe keessaa afur maatii kiyya kan jedhuu fi maqaan isaa akka eeramu kan hin barbaanne jiraataan magaalaa Axaayyee tokko, namni keenya achitti akka yaalaman sodaa guddaa qabna turre jedha.
“Abbeeraa kiyya lama, eessuma kiyyaa fi mucaa eessuma kiyyaati kan ajjeefaman. Anis gaafas rukutamee buufata fayyaa Sanbateen ciisee ture. Ergasiin miidiyaa hawaasummaa irratti arge.
Baayyee nama gaddisiisa, reeffallee akka hin fudhanne dhorkanii guyyaa afur booda kan nuuf kennan,” jedha.
Bulchaan Danaa Jiillee dhummuugaa Obbo Jamaal Hasan, ta’iin namoota yaalaaf deemanirratti raawwatame kun, lola ture daran kan hammeessee fi ammallee yaaddoo guddaa dhiisee kan darbedha jedhu.
“Namoonni keenya yoo xiqqaate reeffa fudhanna jechuudhaani gaaga’ama hamaan kan itti aanee dhufe. Lolli suni guutuu Aanaa keenyaatti akka bal’atu kan godhe isa. Rakkoo lammaffaan xiinsammuu uummataa guddaa miidheera,” jedhan.
Ergasii namootni rasaasaan dhahaman hospitaala deemuurra asumatti duuna jedhanii didaa akka jiranii fi kanneen da’umsaaf gara hospitaalaatti rifarii tahanilleen deemuu diduun rakkoo balaan suni dhale ta’eera jedhan Obbo Jamaal.
Dhimma haleellaa garee namoota yaalaaf hospitaala deemanii ambulaansii keessatti ajjeefamanii kana kan gaafanne naannoo Amaaraatti Bulchaan Godina Shawaa Kaabaa Obbo Taaddasa G/Tsaadiq, ta’iin kun akka jedhamu haleellaadhaan akka hin taane adda baafachaa jirra jedhu.
“Ta’ii kana dhageenyeerra. Garuu akka odeeffamu kanatti miti namootni kuni kan ajjeefaman. Ogeeyyiin fayyaa waan hin turreef, lubbuun isaanii darbuudha kan amma adda baafachaa jirru,” jechuun wanti kanaan addatti jiru yoo jiraate, qorannoon kan mirkanaa’u taha jechuun himan.
Viidiyoo haleellaa kanaa kan miidiyaa hawaasummaarratti qoodamaa jiru kana akka hin arginee fi gareen dhimma kana qoratu sadarkaa federaalaa irraa bobba’ee jiraachuu eeran.
Hanga ammaatti garuu ajjeechaa namoota kunneeniitiin shakkamee namni too’annaa jala oole akka hin jirres BBC’tti himaniiru.
Himannaa Poolisii Addaa Naannoo Amaaraa irratti dhiyaate irratti, poolisiin naannichaa haga ammaa wanti jedhe hinjiru.
Walitti bu’insa naannoo Amaaraa Godinaalee Shawaa Kaabaa fi Saba Oromoo keessatti torbee lama dura mudate ture hordofes, namoonni meeqa aka du’an ifatti baramu baatulleen, heduurra miidhaan qaqabuufi barbadiinsi qabeenyaa olaanaan qaqabuu jiraattootaafi aanga’oonni BBCtti himan.
Ammatti naannichi tasgabaa’aa ta’ulleen, namoonni hedduun qeesaanii irraa buqqa’an deeggarsa eeggataa jiraachun ibsame